Lalao mahafinaritra miaraka amina karazana kolontsaina pop an-jatony: Bam Boost | Androidsis
Bam Boost dia mpifaninana tsy an-kanavaka miaraka amina mpilalao amam-panahy am-polony am-polony hahafinaritra
Bam Boost dia lalao tsotra amin'ny taratasy, fa manana am-polony amina am-polony ireo karazana kolontsaina pop isika, manintona antsika ny haka hazakazaka vitsivitsy hanohitra mpilalao heverina ho hafa.
Miresaka momba ny toetran'ny kolontsaina pop izahay satria hifanena amin'i Snoopy ianao, Elvis Presley, na ny Doc tenany avy any Back to the Future. Betsaka ny zavatra hafa ary ny zava-misy tsotra maniry ny hamaha azy ireo dia efa mametraka antsika amin'ny toerana mety indrindra hanaovana fihetsika avy any ambony ka hatrany ambany hiezaka hahatratra ny tsipika fahatongavana aloha. Ataovy.
1 Tongava amin'ny tsipika fahatongavana aloha
2 Peter Pan, miverina amin'ny ho avy Doc ary bebe kokoa amin'ny Bam Boost
3 Manokatra litera
Tongava amin'ny tsipika fahatongavana aloha
Ny Bam Boost dia miavaka amin'ny a toetra amam-panahy natao tamin'ny piksel izay mihazakazaka tsy an-kijanona manaraka ny lalan-kely iray ka amin'ny fihetsika miakatra na miakatra no ahafahantsika manao azy mandroso amin'ny iray hafa.
Ny fon'ny olana dia marina amin'izao fotoana izao rehefa miova lalana isika, raha sendra mpihazakazaka hafa isika, hahazo tosika isika izay hahatonga antsika hihazakazaka bebe kokoa hahatratra ny ambiny.
Raha manomboka isika manaova fihetsika iray hafa hamelezana ny mpanohitra, ho hitantsika fa ny toetrantsika malaza dia manidina mandra-pahatongany any amin'ny tsipika fahatongavana an-jatony. Toy izao no andikana ny filalaovana an'ity tsy dia misy dikany ity fa miaraka amin'ny zavakanto pixel vitany dia mahavariana antsika, na dia tsy manao mihoatra noho ny manao fihetsika haingana aza isika avy eo.
Peter Pan, miverina amin'ny ho avy Doc ary bebe kokoa amin'ny Bam Boost
Ary araka ny efa nolazainay, fa ny zavakanto pixel ao amin'ireo endri-tsoratra an-jatony maro izay tsy maintsy hamoha antsika no tena mampisy an'i Bam Boost. Avy amin'ny pejin'ny vokatra dia ampitandremana isika fa milalao mpilalao hafa isika, na dia tsy izany aza endrika tsy mifanaraka (izany hoe, dika mitovy amin'ny lalaon'izy ireo).
Na izany aza, ny zava-misy fa manokatra tarehin-kolontsaina pop vaovao miaraka amin'ny vola madinika volamena isika, dia midika fa mahita dokam-barotra mihitsy aza izahay hahazoana valisoa roa heny na avy amin'ny pejin'ny tarehintsoratra omena anay mandresy ireo farantsa volamena 300 ireo.
ny karazana tontolo iainana maro karazana, na dia tsy maintsy mandray hazakazaka vitsivitsy aza isika mandra-pahatongantsika mamoha azy ireo.
Lazaina ny marina, ny filalaovana no izy, fa ahoana ny fomba ahafahanay mamoha ireo tarehin-tsoratra ireo toy ireo fomba fiteny sy ny maro hafa, ankoatry ny fahatsapantsika fa milalao mpilalao marobe isika dia manome elanelana ho an'ny Bam Boost hanazava fa indraindray ny lalao tsotra kokoa dia manome lalao bebe kokoa noho ireo sarotra kokoa.
hita maso manintona ny saina amin'ny kanto pixel mampihomehy notanterahina tamin'ny famolavolana endri-tsoratra maro dia maro (ary betsaka izy ireo ary maro amin'izy ireo no miavaka haingana be). Ity antsipiriany ity no tsara indrindra amin'ny lalao izay tsy hahagaga antsika raha nilalao kokoa noho ny nieritreretantsika azy voalohany izany.
Bam Boost dia lalao adala handany fotoana fohy minitra vitsy ary hahitana dokam-barotra hahazoana vola madinika hahazoana antoka fa mitondra tombony tsara ho an'ny mpandrindra. Adala tanteraka mahazo vola madinika ary mahazo Doc; Efa nataonay izany, ka anjaranao izao. Mandao anao izahay miaraka amin'ny iray amin'ireo zombie somary adala ihany koa.
Ny famohana ireo mpilalao kolontsaina pop malaza dia iray amin'ireo sary manintona lehibe indrindra.
Votoaty be dia be hamaha
Tsy azontsika antoka raha mifanohitra amin'ny hafa isika
Mampitombo ny Bam
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Bam Boost dia mpifaninana tsy an-kanavaka miaraka amina mpilalao amam-panahy am-polony am-polony hahafinaritra
Anisan'tsika no nahazo ny loka Breakthrough Golden Joystick "roa taona taorian'ny nanombohany